Iindaba - Liyintoni iphepha lokudlulisa ubushushu kwaye luthini usetyenziso lwalo oluthile?
Liyintoni iphepha lokudlulisa ubushushu kwaye luthini usetyenziso lwalo oluthile?
Iphepha lokutshintshela (ukukhanya) A4
I-A4 ifomathi ye-T-shirt eyeyakho iphepha elikhethekileyo lokudlulisa ubushushu: iphepha elikhanyayo lokudlulisa umbala lilungele ukuprinta iipateni kwiimpahla ezinombala okhanyayo. Idigri yokunciphisa umbala wepatheni edluliselwe ngephepha lokudlulisa iphezulu, ayinamibimbi, ilastiki, ikrazuka kwaye ayinakuqhekeka, kwaye umgangatho wesandla ugqwesileyo kwaye akukho mvakalelo inzima. Umgangatho wephepha lokudlulisa i-T-shirt yasekhaya awunakufezekiswa. Lolona khetho lulungileyo lokudlulisela iT-shirt kunye nokuprinta isikipa somntu! Inokuprintwa kumbala okhanyayo we-100% we-cotton cloth, kubandakanywa ne-T-shirt, i-maozi, njl. Hlamba i-100% ngaphandle kokuchithwa kunye nokucima.
Iphepha lokutshintshela (umbala okhanyayo) A3
I-A3 ifomathi ye-T-shirt eyeyakho iphepha elikhethekileyo lokudlulisa ubushushu: iphepha elikhanyayo lokudlulisa umbala lilungele ukuprinta iipateni kwimpahla ekhanyayo. Idigri yokunciphisa umbala wepatheni edluliselwe ngephepha lokudlulisa iphezulu, ayinamibimbi, ilastiki, ikrazuka kwaye ayinakuqhekeka, kwaye umgangatho wesandla ugqwesileyo kwaye akukho mvakalelo inzima. Umgangatho wephepha lokudlulisa i-T-shirt yasekhaya awunakufezekiswa. Lolona khetho lulungileyo lokudlulisela iT-shirt kunye nokuprinta isikipa somntu! Inokuprintwa kumbala okhanyayo we-100% we-cotton cloth, kubandakanywa ne-T-shirt, i-maozi, njl. Hlamba i-100% ngaphandle kokuchithwa kunye nokucima.
Iphepha le-ink jet lokushicilela ukutshintshela
Ifomathi ye-A3, umgangatho ococekileyo, i-ceramic, isinyithi, i-semi cotton, ukuhanjiswa kwezinto zesilika, okukhethekileyo, ibakala eliphezulu
Iphepha lokutshintshela (mnyama)
Iphepha elikhethekileyo lokutshintshwa okushushu kwi-T-shirt yomntu ngamnye: iphepha lokudlulisa elimnyama lifanelekile ukuprinta iipatheni kwiingubo ezimnyama. Iqondo lokunciphisa umbala wepateni edluliselwe ngephepha lokudlulisa liphezulu, alishwabenanga, lilastiki, likrazuka kwaye aliqhekeki. Umgangatho wesandla ugqwesileyo kwaye akukho mvakalelo inzima. Umgangatho wephepha lokudlulisa i-T-shirt yasekhaya alikwazi ukufikelela. Lolona khetho lulungileyo lokudlulisela iT-shirt kunye nokuprinta isikipa somntu! Inokuprintwa kumbala okhanyayo we-100% we-cotton cloth, kubandakanywa ne-T-shirt, i-maozi, njl. Hlamba i-100% ngaphandle kokuchithwa kunye nokucima.